LA LIGA: Kooxda Real Madrid oo guul ka gaartay Malaga oo marti u ahayd, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Sergio Ramos… + SAWIRRO – Gool FM
LA LIGA: Kooxda Real Madrid oo guul ka gaartay Malaga oo marti u ahayd, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Sergio Ramos… + SAWIRRO
(Madrid) 21 Jan 2017 – Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 2-1 uga badisay naadiga Malaga oo marti u ahayd, iyadoo uu Ramos labadan gool u dhaliyey Los Blancos kabtan Sergio Ramos.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayey Real Madrid labada gool la timid waxaana u dhaliyey kabtan Sergio Ramos.
Goolka hore Sergio Ramos ayaa madax ku dhaliyey kaddib karoos uu soo qaaday 35’daqiiqo Toni Kroos, ka hore inta uusan 43’daqiiqo markale ka caawin Toni Kroos goolka labaad ee Sergio Ramos kulanka ayaana lagu kala nastay 2-0 ay ku gacan sarreysay Real Madrid.
Qeybtii labaad markii dib la isugu soo laabtay Malaga ayaa hal gool iska soo magtay, waxaana 63’daqiiqo u dhaliyey Juanpi, laakiin goolkaasi guuldarro kama badbaadin oo waxa ay Real Madrid ku adkaatay 2-1.
GOOGOOSKA: Manchester City vs Tottenham 2-2
Wayne Rooney oo noqday laacibka ugu goolasha badan taariikhda Manchester United